Wepamusoro 5 Matipi eSurvey Ukuru Martech Zone
Muvhuro, April 23, 2012 Muvhuro, Ndira 22, 2018 Hanna Johnson
Iko kune chokwadi chakareruka chinounzwa neInternet era: Kukumbira mhinduro uye kuwana nzwisiso kune yako vatengi base uye chinangwa musika zviri nyore. Izvi zvinogona kuve chokwadi chinoshamisa kana chinotyisa, zvinoenderana nekuti iwe ndiwe ani uye chii chauri kutsvaga mhinduro nezvazvo, asi kana iwe uri mumusika kuti ubatane neako base kuti uwane maonero avo echokwadi, une matani yemahara uye inodhura sarudzo dzaungaite. Pane nzira dzipi nedzipi dzaungaite izvi, asi ini ndinoshanda ku SurveyMonkey, saka nzvimbo yangu yehunyanzvi iri, sezvazviri, kugadzira ongororo dzepamhepo dzinopa mhedzisiro yakajeka, yakavimbika, inogoneka.
Isu tinotora kwedu basa kukubatsira iwe kuita sarudzo dzakanakisisa dzinobvira zvakakomba, kunyangwe iwe uri kuyedza kusarudza kuti ndeipi pikicha yekushandisa pabutiro, ndezvipi zvigadzirwa zvinogadziridzwa kuisa pamberi, kana kuti ndeapi maappetizeti ekushandira pane yako yekutanga pati. Asi ko kana usati wamboita ongororo yepamhepo, kana kuvhiringidzwa neese maficha maficha (svetuka pfungwa? Icho chiri mhando yeviri dutch ??)
Ini ndichachengetedza kuomarara kweedu maficha ekuongorora kune imwe nguva (kunyangwe ndichigona kukuudza zvakachengeteka, Dzika Logic haina chekuita nekusvetuka tambo). Asi ini ndiri kuenda kugovana newe izvi zvepamusoro zvishanu zvemukati matipi ekugadzira yakanakisa online ongororo.
1. Tsanangura zvakajeka Icho Chinangwa cheYako Online Ongororo
Iwe haungatange mushandirapamwe usina kujekesa zvinangwa zvemushandirapamwe (wedzera ruzivo rwemakambani, kutyaira vatendeuki, kuzvidza vakwikwidzi vako, nezvimwe), ungadaro? Zvinangwa zvisina kujeka zvinotungamira kumhedzisiro isina kujeka, uye chinangwa chese chekutumira ongororo yepamhepo kuwana mhedzisiro inonzwisisika uye kuitirwa. Tsvagurudzo dzakanaka dzine chinangwa chimwe kana zviviri zvakanangwa zviri nyore kunzwisisa nekutsanangurira vamwe (kana iwe uchikwanisa kuzvitsanangurira zviri nyoreth grader, iwe uri munzira chaiyo). Tora nguva kumusoro kumberi kuti uone, mukunyora:
Nei urikugadzira iyi ongororo (chii chiri chinangwa chako)?
Chii chaunotarisira kuti ongororo iyi ichakubatsira iwe kuzadzikisa?
Ndedzipi sarudzo dzaunotarisira kukanganisa nemhedzisiro yeongororo iyi, uye ndeapi matanho akakosha edhata aunoda kuti usvike ikoko?
Zvinonzwika zviri pachena, asi isu takaona yakawanda ongororo apo maminetsi mashoma ekuronga aigona kunge akaita musiyano pakati pekugamuchira mhinduro dzemhando yepamusoro (mhinduro dzinobatsira nekuita) kana data risingataurike. Kutora mashoma mashoma maminetsi kumberi kwekupedzisira kweongororo yako kunobatsira kuona kuti urikubvunza mibvunzo kwayo kuti usangane nechinangwa uye nekugadzira data rinobatsira (uye richakuchengetera toni yenguva uye nemusoro kumashure kumagumo).
2. Chengeta Iyo Ongororo Ipfupi Uye Yakajeka
Senge dzakawanda nzira dzekutaurirana, yako online online ongororo yakanakisa kana ipfupi, inotapira, uye kune iyo poindi. Ipfupi uye yakatarisa inobatsira nezvose zviri zviviri uye huwandu hwekupindura. Zvinowanzova zvirinani kutarisa pachinangwa chimwe chete pane kuyedza kugadzira ongororo yepamusoro inovhara zvinangwa zvakawanda.
Ongororo pfupi ipfupi inowanzove nemitengo yepamusoro yekupindura uye kusiyiwa kwakadzika pakati pevakabvunzurudzwa. Hunhu hwevanhu kuda kuti zvinhu zvikurumidze uye zvive nyore - kana munhu anotora ongororo akarasikirwa nechido ivo vanongosiya basa - vachikusiya nebasa rakashata rekududzira iyo yakasarudzika data yakatarwa (kana kusarudza kuirasa kunze pamwechete).
Ita shuwa kuti yega yemibvunzo yako yakanangana nekubatsira kuzadzisa chinangwa chako chakataurwa (Hauna imwe? Dzokera kudanho rekutanga). Usakande mu 'yakanaka kuva' nemibvunzo isingape zvakananga data kuti ikubatsire kuzadzisa zvinangwa zvako.
Kuti uve nechokwadi chekuti ongororo yako ipfupi zvine musoro, nguva vanhu vashoma pavanotora. SurveyMonkey research (pamwe naGallup nevamwe) yakaratidza kuti iyo kuongorora kunofanira kutora maminitsi mashanu kana mashoma kuti apedze. 6 - 10 maminetsi anogamuchirwa asi isu tinoona akakosha ekusiya mareti anoitika mushure memaminitsi gumi nerimwe.
3. Chengeta Mibvunzo Iri Nyore
Ita shuwa kuti mibvunzo yako inosvika padanho uye dzivirira kushandiswa kweindasitiri-yakatarwa jargon. Isu takagara tichiwana ongororo nemibvunzo mumitsara ye: "Wakapedzisira riini kushandisa yedu (isa technical indasitiri mumbo jumbo pano)? "
Usafunge kuti avo vanotora ongororo vakagarika nemazita ako uye matauriro sezvauri. Spell it out for them (rangarira kuti 8th grader iwe wakamhanya zvinangwa zvako? Kumbira mhinduro yavo - chaiyo kana inofungidzirwa - kune ino nhanho zvakare).
Edza kuita kuti mibvunzo yako ive yakanangana uye yakatwasuka sezvinobvira. Enzanisa: Ndeupi ruzivo rwako rwave uchishanda pamwe neyedu HR timu? Ku: Unogutsikana sei nenguva yekupindura yetimu yedu yeHR?
4. Shandisa Yakavharwa Kupera Mibvunzo Pese pazvinogoneka
Yakavharwa yakapera mibvunzo yemibvunzo inopa vanopindura sarudzo dzakasarudzika (semuenzaniso Hongu kana Kwete), zvichiita kuti ongororo yako ishande nyore. Mibvunzo yakavharwa inopera inogona kutora fomu yes / kwete, yakawanda sarudzo, kana chiyero cheyero. Yakavhurika yakapera mibvunzo yekuongorora inobvumira vanhu kupindura mubvunzo nemazwi avo. Mibvunzo yakavhurika - yakanaka kupamhidzira data rako uye inogona kupa ruzivo rwakakosha uye hunhu. Asi nezve kubatanidza uye kuongorora zvinangwa, yakavharwa mibvunzo yakapera yakaoma kurova.
5. Chengeta Chiyero Scale Mibvunzo Inowirirana Kubudikidza Nekuongorora
Kuyera zviyero inzira huru yekuyera uye nekuenzanisa maseti ezvimwe. Kana iwe ukasarudza kushandisa zviyero zvechiyero (semuenzaniso kubva pa1 - 5) ita shuwa kuti unozvichengeta zvakaenzana mukati meongororo. Shandisa iyo yakafanana nhamba yemapoinzi pachiyero (kana zvirinani izvozvi, shandisa mazwi anotsanangudza), uye ita chokwadi chine chirevo chekugara kwakadzika uye kwakadzika kugadzikana mukati meongororo. Zvakare, zvinobatsira kushandisa isinganzwisisike nhamba pachiyero chako kuita kuti ongororo yedata ive nyore. Kuchinja zviyero zvako kutenderedza kunovhiringa vanotora, izvo zvinotungamira kumhinduro dzisina kuvimbika.
Ndizvozvo zvemazano epamusoro mashanu ehukuru hwekuongorora, asi kune toni yezvimwe zvinhu zvakakosha zvekuchengetedza mupfungwa paunenge uchigadzira yako online ongororo. Tarisa uone zvakare muno kune mamwe matipi, kana tarisa yedu SurveyMonkey blog!
Tags: yakapera-kupera mubvunzo wekuongororayakavhurika-yakapera ongororo mubvunzozviyero zvekuyerasvetuka pfungwadhizaini yekuongororaurefu hwekuongororakuongorora chinangwaMibvunzo yekuongororamatipi ekuongororaSurveyMonkeysurveyzoomerang
Hausi Iwe Fortune 500
Apr 24, 2012 pa 2: 04 PM